Steel izakhiwo izakhiwo, izakhiwo: izinhlobo, izici obandayo, ngebuhle nebubi
Emkhakheni wezingalo okwakha izinto eziyinsimbi izakhiwo waqala ukusebenzisa kusukela nekhulu le-19, kodwa obanzi kunayo abazitholile muva. Incazelo Kulula - ukuqina, ukuphepha kanye ukuthembeka izakhiwo uvumele inhlangano disassembly ngaphandle kokulahleka izinga.
Ukwakhiwa nokufakwa izakhiwo steel zithandwa ngenxa isisindo sayo ukukhanya, kalula ukufakwa futhi eziphansi material. Metal ezakhiwe asetshenziswa ezindaweni eziningi: ukudala imibukiso kanye eziyinxanxathela, izakhiwo zokuhlala, emafektri, workshop, commercial, ibhizinisi nezindawo zemidlalo.
Kuze kube manje, lobu buchwepheshe kubhekwa futhi ingenye inzuzo kakhulu ukwakhiwa kwanoma iyiphi izakhiwo turnkey, ngoba kunika ithuba ukuphothula umsebenzi ngokushesha ngangokunokwenzeka. Lokhu kumayelana hhayi kuphela elula, kodwa futhi izinto ngempela eziyinkimbinkimbi: izakhiwo ukweseka, ephezulu liphumele izakhiwo, izitolo, izindawo zokubeka impahla zezimboni nokunye.
Steel izakhiwo izakhiwo, izakhiwo kabanzi ngenxa ukusebenza yayo izici ezibaluleke kakhulu, okuwukuthi, ukuphila isikhathi eside futhi ihlala isikhathi eside. Buhle le nto Kuyaphawuleka ukuthi ukufakwa kwalo akudingi imishini ekhethekile noma inani elikhulu labantu, ngaleyo ndlela kunciphisa tindleko sokugcina umsebenzi.
Yini enquma intengo ukufakwa izakhiwo steel?
Njengoba kushiwo ngenhla, ukwakhiwa kwale nto inezici ezithile ezikwenza kube lula lobu buchwepheshe ethandwa e ezimakethe zanamuhla. Metal izakhiwo ukunikeza izinzuzo ezilandelayo:
Isisindo ukukhanya ziqhathaniswa zokwakha efanayo, okuyinto wenza kube lula ukufakwa kanye nokususwa inqubo.
Ukwakhiwa isakhiwo ithatha isikhathi lemfisha futhi wenziwa izikhathi 2-3 ngokushesha kunokuba usebenzisa amasu ejwayelekile futhi izinto.
Ukumelana lokushisa, umswakama kanye ukushisa.
Izindleko ukwakhiwa isebenza kwehle ngo izikhathi eziningana ngenxa yokuthi ukufakwa metal izakhiwo, izitolo asidingi ethela isisekelo okukhulu.
High ezishisayo ukwahlukanisa properties kunganciphisa izindleko zokuqhuba ibhizinisi lakhe zezakhiwo bazakha.
ukufakwa metal izakhiwo
Ukwakhiwa usebenzisa le nto inikeza lula ukuhamba sibonga - esimweni izingxenye ezidingekayo, ungakwazi ngokushesha futhi kalula ukuthutha kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye. Kulokhu, zingaba amathuluzi ngokuphindaphindiwe ukuqaqa noma behlangana, ngaphandle kokudala sanoma yikuphi ukulimala kwe yonke into. Ngaphezu kwalokho, steel nezakhiwo prefabricated kungashintshwa ngokwandisa endaweni yabo kanye nenani phansi, ngaphandle asebenzise izinsiza kanye nezindleko isikhathi.
Kuqhathaniswa ukwakhiwa dolobha, ukwakhiwa metal izakhiwo kuyindlela ephumelela kakhudlwana. Ngalobu buchwepheshe kungenzeka nge utshalomali okuncane sifinyelele izinga okusezingeni eliphezulu, into esakhiwe kuzohluka ukusebenza ngempela okuhle. Ijubane ukufakwa kanye nekhono isebenze izakhiwo ngaphandle isikhathi ukudliwa ukuze akwazi ukufeza umsebenzi kokuqeda kwenza lezi zixazululo eziyinkimbinkimbi metal izakhiwo ukuze kwakhiwe izakhiwo zezimboni kanye izakhiwo ngendlela emangalisayo elula futhi ewusizo, ikakhulukazi labo izimo lapho udinga recoup ngokugcwele izimali izimali zebhizinisi.
Ububanzi buildings izakhiwo steel based
Steel izakhiwo izakhiwo, izakhiwo, iningi kakhulu ukwakhiwa kwezohwebo, izimboni kanye civil lezinto, ekugcineni ngokuwina udumo ezingasho. Esakhiwe zokwakha engasindi njengamanje asetshenziswa kabanzi. Njengoba ubuchwepheshe kwentuthuko ukudala izigaba mncane-ngabafaka nezigaba abandayo eyakheke nokuthuthukisa indawo ukwakhiwa kwezindlu i yokuhlala ngabanye.
Emihle nemibi izakhiwo steel
Izakhiwo ezakhiwa kusukela metal, babe bobabili ngebuhle nebubi. Ubuhle balendlela izici ezilandelayo:
Ukuthembeka. Inikeza iyunifomu isakhiwo sensimbi futhi kutfotjelwa ebalisisiwe impahla yayo izinga.
Lightness. isisindo Khanyisa lula kakhulu inqubo nokwakhiwa kwezakhiwo.
Umnotho. Kuqhathaniswa zokwakha standard, ukwakhiwa kwesakhiwo metal (izakhiwo) kukhona obandayo ngokushesha, a eliphezulu ukukhiqizwa processability futhi kalula isitayela ngokusebenzisa izakhi ejwayelekile.
Naphezu kwakho konke lokhu, kukhona kulolu hlobo ukwakhiwa kanye nezihibe. Nokho, kuyafaneleka ukuthi cishe bonke of them kuyaqedwa ngo isicelo amagadango akhethekileko zokuzivikela. Phakathi bokwenza zihlanganisa:
Insimbi. Ngaphansi kwethonya kwezulu, umswakama, futhi onakalisayo ezindaweni steel iqala ukukhukhula abakho wedwa, okungaholela ekubhujisweni kwaso okuphelele. Ukulungisa kungenzeka ngu esikhethekile izingoma enamathela impahla.
Izinga eliphansi umlilo ukumelana. Steel izakhiwo balahlekile uma ukufuthelana ngenhla 600 ° C Steel izakhiwo izakhiwo, izakhiwo ngempela ivikelwe ngokukhethekile amapuleti ukumelana nomlilo noma izakhiwo.
Ukwahlukanisa metal ezakhiwe
Ozimele ezakhiweni - amakholomu ezahlukene, nemishayo, nemibundu, besokunxele, Trusses, nokunye.
Steel izakhiwo izakhiwo - ozimele futhi eyiqinisa anezikhala, ishidi izinto, ephezulu liphumele izakhiwo, Uhlaka izindlu.
Ishidi ezakhiwe - ulwelwesi kanye diaphragm, isibonelo, iphansi ephezulu liphumele izakhiwo. Futhi zihlanganisa amathangi, emseleni, futhi ovundlile isothermal ukwakhiwa kwesigubhu.
High-liphumele izakhiwo - izindawo asekelayo, ezihlukahlukene tower ne izinti nezintambo zikagesi.
Design esetshenziswa emkhakheni yokusansimbi.
Ukukhonza - ezicijile, izitebhisi nakuzingxenyekazi.
Metal netakhi babevikela imiphumela ebuhlungu amathonya zemvelo, esehlanganise izakhiwo ezikhethekile noma otsinkovyvaya.
Ubuciko ekwakhiweni kwezakhiwo
Zonke izakhiwo, yakheke usebenzisa izakhiwo metal zihlukaniswe ngezigaba ezimbili eziyinhloko: frameless futhi uzimele. Esikhathini Uhlobo lokuqala Uhlaka izakhiwo ukwenza indima odongeni. Uhlobo uthango wesibili yamisa futhi izakhi umthwalo eziveza, yonke imithwalo kusukela isisindo isakhiwo, imiphumela ashukumisayo nokunye. bawe phezu ifreyimu asekelayo.
Yena simele izakhi ezakhayo zazo oxhumene ibe uhlelo olulodwa. Izingxenye ezisemqoka zihlanganisa amakholomu, nemishayo, nemibundu, udonga bakasilika izingodo, podstropilnye futhi Trusses. Zonke izikimu izidumbu zihlukaniswe izinhlobo ezintathu eziyisisekelo: Uhlaka-Svjaseva, Uhlaka kanye Svjaseva.
Design zezakhiwo steel
Ngo ukuthuthukiswa imibhalo ukuze kwakhiwe ezithile saziso esekelwe imithetho nokulungisa emkhakheni wokwakha. Design of ezakhiwe kwenziwe Ngenxa ekwakhekeni, ezokuthutha, ebeka, injongo kanye nokusebenza ngeziningi zezinto zokwakha.
a impahla akhiwo wenza ikhumbula zonke izidingo kungenzeka nemibandela lobuchwepheshe ezisebenza mikhiqizo imibhalo lobuchwepheshe. Kuphoqelekile kufanele kube ukulethwa izakhiwo steel ezakhiweni, izakhiwo. Amanani entengo izinto ezinjalo elibekwe kuncike izici zawo, izimo zokusebenza kanye uya khona. Izindleko kungaba isukela ruble per imitha square 35 1500.
Erection metal izakhiwo ingenye okunye enenzuzo kakhulu bendabuko ukwakhiwa dolobha. Uma ungathola imiphumela ephezulu nge utshalomali sakugcina besebenzisa lolu ubuchwepheshe, into eqeda iyokwehluka ukusebenza ngempela okuhle. Ijubane kalula ukufakwa kwenza ubuchwepheshe best futhi zikhululekile kakhulu ngalezo zikhathi lapho udinga recoup imali etshaliwe ebhizinisini.
Inqwaba isisekelo: ibanga phakathi yinqwaba (esiphezulu kanye esincane)
Umuthi 'Pertussin ". imfundo
Baphi-skrini ku "Umusi" - ukuthola umhlahlandlela
Umbuzo okhathazayo: uma ukwenza ukuhlolwa sokukhulelwa